musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Boeing yekuvaka mhando nyowani yedrone muAustralia
Airlines • nhandare yendege • Australia Kuputsa Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Investments • nhau • vanhu • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Akavimbika Wingman ndiye ndege yekutanga yekurwa nemauto kugadzirwa uye kugadzirwa muAustralia muhafu yezana ramakore. Boeing Australia parizvino iri kugadzira nhanhatu dzendege iyi ichibatana neRoyal Australian Air Force.
Boeing yakafumura hurongwa hwekuvaka mhando nyowani yendege yemuchadenga ndege yemauto kuAustralia.
Boeing nyowani yemauto drone inoshandisa huchenjeri hwekugadzira kuti ishande pamwe chete nendege dzakagadzirwa.
Boeing yasarudza guta reToowoomba muQueensland senzvimbo yekupedzisira yemusangano yendege dzayo dzisina kuvimbika dzeLoyal Wingman.
US Aerospace hofori Boeing yazivisa kuti iri kuronga kuvaka yayo nyowani isina kuzivikanwa Loyal Wingman ndege muAustralia.
Sekureva kwaBoing, yakasarudza guta reToowoomba muQueensland state senzvimbo yekupedzisira yegungano rerudzi rwayo rutsva nendege dzemauto. Yekutanga ndege dzekuyedza dzakapedzwa kutanga kwegore rino.
Chiziviso chinouya svondo mushure mekunge United States, United Kingdom neAustralia vazivisa a mubatanidzwa mutsva wekuchengetedza iyo ichapa Australia magarmarini ane simba renyukireya. Chibvumirano chakashorwa neChina uye chakawedzera kusagadzikana munzvimbo yeIndo-Pacific.
Maererano ne Boeing Kudzivirira Australia, kuvandudzwa kwendege nyowani kuri kuenda sekuronga. IUAva nyowani inoshandisa huchenjeri hwekugadzira kuti ishande pamwe chete nendege dzinogadzirwa uye yakave nemimba, yakagadzirirwa nekugadzirwa muAustralia.
Ndege dzemauto ekutanga kurwa uye kugadzirwa muAustralia muhafu yezana ramakore. Boeing Ositireriya parizvino irikugadzira nendege nhanhatu dzakabatana neRoyal Australian Air Force.
Hapana mirairo yakasimbiswa parizvino, anodaro Boeing, asi hurumende yeAustralia inoita seine chivimbo uye inofara nezve kugona kwaLoyal Wingman.
Drone nyowani ichavakwa mune imwe nzvimbo kuWercamp Airport, iyo iri yeWagner Corporation.
Sachigaro weWagner, John Wagner akati anotarisira kuti nzvimbo yekudzivirira uye yendege inokwezva makambani mazhinji munzvimbo dzakadai.
Iyo purojekiti inotarisirwa kuumba mazana matatu emabasa panguva yekuvakwa kwenzvimbo uye makumi manomwe anoenderera ekushanda uye ekugadzira nzvimbo.
Queensland State Premier Annastacia Palaszczuk akati chiziviso ichi "inonakidza nhau" uye inomiririra kekutanga Boeing yavaka nzvimbo yerudzi urwu kunze kweNorth America.